လူငယ်စစ်တမ်းအစီရင်ခံစာ- ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးတွင် လူငယ်အသိပညာနှင့် စိတ်ဝင်စားမှု - ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု
လူငယ်စစ်တမ်းအစီရင်ခံစာ- ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးတွင် လူငယ်အသိပညာနှင့် စိတ်ပါဝင်စားမှု
ဇန်နဝါရီလ 13, 2022 သုတေသန, လူငယ်အာရုံစူးစိုက် 1
ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးတွင် လူငယ်အသိပညာနှင့် စိတ်ပါဝင်စားမှု
ဧပြီလ 2021, ထိုအတွက် ငွိမျးခမျြးရေးပညာရေးကို Global ကင်ပိန်း (GCPE) အထက်တန်းကျောင်းနှင့် ကောလိပ်အရွယ်လူငယ်များကြား ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လူမှုတရားမျှတမှုဆိုင်ရာ ပညာရေးကို ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်နှင့် စိတ်ပါဝင်စားစေရန် လူငယ်များကို အဓိကထား စစ်တမ်းတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာသည် Global Campaign ၏တွေ့ရှိချက်နှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုရလဒ်ဖြစ်သည်။ အဆုံးစွန်အားဖြင့်၊ GCPE သည် ဤအစီရင်ခံစာသည် လူငယ်များ၏ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို တိုးမြင့်လာစေရန်အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးတွင် လူငယ်များ၏ အသိပညာနှင့် စိတ်ပါဝင်စားမှုတို့ကို ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လူမှုတရားမျှတမှု ပညာရေးဆိုင်ရာ လူငယ်စစ်တမ်းကို ဂျော့တောင်းတက္ကသိုလ်ရှိ တရားမျှတမှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာရေးအစီအစဉ်တွင် အဓိက ကျောင်းသားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် Global Campaign for Peace Education Youth Team မှ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဖွဲ့၀င်များမှာ Keaton Nara၊ Caelan Johnston၊ Maude Peters၊ Heather Huang နှင့် Gabby Smiley တို့ ပါဝင်သည်။ အစီရင်ခံစာနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအား Micaela Segal de la Garza၊ ပရိုဂရမ်မန်နေဂျာ၊ နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးဆိုင်ရာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကမ်ပိန်း၏ ညှိနှိုင်းရေးမှူး Tony Jenkins တို့က ကြီးကြပ်ခဲ့ပါသည်။
Global Campaign for Peace Education Youth Team သည် ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေး လူငယ်ကွန်ရက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် စူးစမ်းလေ့လာရန် စစ်တမ်း ဖြေဆိုသူများကို လိုက်လံ ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိသည်။
အဓိက တွေ့ရှိချက်များနှင့် အကြံပြုချက်များကို အောက်တွင် ပြန်လည်ဖော်ပြထားသည်။ နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက် အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
လက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာပေး ပရောဂျက်များနှင့် အစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြေဆိုသူများသည် အကြမ်းဖက်မှု ကာကွယ်ရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့် ကျားမရေးရာ အကြမ်းဖက်မှုတို့တွင် စိတ်ဝင်စားမှု အမြင့်မားဆုံးဖြစ်ကြောင်း သရုပ်ပြခဲ့သည်။
ဖြေဆိုသူများသည် တရားထိုင်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်များတွင် သတိအနည်းဆုံးပမာဏကို သရုပ်ပြခဲ့ကြသည်။
အထူးသဖြင့် ကျားမရေးရာ အကြမ်းဖက်မှု၊ အကြမ်းဖက်ဝါဒနှင့် လူမျိုးရေးအကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ လူမှုရေးတရားမျှတမှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် စိတ်ဝင်တစားရှိခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အားလုံးသည် လူဦးရေ အချိုးအစားအလိုက် သိသာထင်ရှားသော အကြောင်းအရာများအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။
ကမ္ဘာ့ ကောလိပ် အရွယ် လူဦးရေ အချိုးအစား အတွက် - ငြိမ်းချမ်းရေး လေ့လာမှု ပရိုဂရမ် များတွင် စာရင်းသွင်း ထားသော နှင့် စာရင်းသွင်းခြင်း နှစ်ခုလုံး အတွက် - လူမှုရေး တရားမျှတမှု ပရောဂျက် များနှင့် ပရိုဂရမ် များ တွင် နိုင်ငံရေး စိတ်ပါဝင်စားမှု အတွက် ထိပ်တန်း အဆင့် သတ်မှတ် ထားသော ဘာသာရပ် ဖြစ်ပါသည်။
လူငယ်များကို အာရုံစိုက်လေ့ကျင့်မှုအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုကို တိုင်းတာရာတွင် ဖြေဆိုသူများသည် ပျမ်းမျှအားဖြင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာဆိုင်များတွင် စိတ်ဝင်စားမှုအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကို သရုပ်ပြခဲ့သည် (ဆိုလိုသည်မှာ တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုမှတစ်ဆင့် စိတ်ကူးသစ်များရရှိရန် အခွင့်အလမ်းများ) ကို စစ်တမ်းက တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဖြေဆိုသူအများစုသည် အသက်အရွယ်၊ တည်နေရာ၊ သို့မဟုတ် ငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာရေးအစီအစဉ်များတွင် စာရင်းသွင်းခြင်းမရှိဘဲ ကျောင်းပြင်ပတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးပညာပေးအစီအစဉ်များနှင့် ပရောဂျက်များအကြောင်း သင်ယူခဲ့ကြသည်။ စာသင်ကျောင်းများတွင် တရားဝင် ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေးကို စိတ်ဝင်စားမှု သိသိသာသာ နည်းပါးနေပါသည်။
ထောက်ခံချက်ကျောင်းသားများ၏ အကျိုးစီးပွားကို ဖြေရှင်းပေးသည့် ကျောင်းများတွင် ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေး အခွင့်အလမ်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ပံ့ပိုးကူညီခြင်း၊ ကျောင်းသားများအား ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေးအစီအစဉ်အတွက် ထောက်ခံအားပေးနိုင်စေရန် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ကျောင်းသားများအား ဆွဲဆောင်နိုင်စေရန် (ဖြေဆိုသူများသည် တစ်စုံတစ်ခုသော စိတ်ဝင်စားမှုကို ပြသခဲ့သည်)။
ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးသည် ပင်ရင်းအားဖြင့် ရပ်ရွာလူထုက တွန်းအားပေးပြီး လူငယ်အများစု စိတ်ဝင်စားပုံပေါ်သည့် လူထု၏ အသွင်သဏ္ဍာန်ဖြစ်သည် အတိအကျပင်။
ထောက်ခံချက်− ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအကြောင်း ကျောင်းသားများအား ပညာပေးသည့် ကျောင်းများတွင် ကလပ်များဖန်တီးပြီး ရပ်ရွာဆက်ဆံရေးကို မြှင့်တင်ရန် နေရာတစ်ခု ဖန်တီးပါ။ ရပ်ရွာစင်တာများသို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာပေးခြင်း၊ ကျောင်းပြီးရင် ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာပေး အစီအစဉ်တွေ ပံ့ပိုးပေးတယ်။
လူငယ်များအား ၎င်းတို့၏ ပညာရေးတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်နိုင်စေရန် အခွင့်အလမ်းများ ပေးအပ်ခြင်းသည် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါသည်။
ထောက်ခံချက်− ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအစီအစဉ်နှင့် အကြောင်းအရာများသည် ဆရာ/ဆရာမများ၏ အကျိုးစီးပွားသာမက ကျောင်းသားများ၏ လူမှုတရားမျှတမှုဆိုင်ရာ အကျိုးစီးပွားများနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ရည်ရွယ်၍ ရေးဆွဲထားသင့်ပါသည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းများသည် လူငယ်ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ရပ်ရွာလူထုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ Instagram၊ Facebook၊ Twitter နှင့် သတင်းလွှာများသည် ဖြေဆိုသူများကြားတွင် အသုံးအများဆုံးကိရိယာများအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
ထောက်ခံချက်- လူငယ်များနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်သော ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းများကို ဖန်တီးပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးတွင် ၎င်းတို့စိတ်ဝင်စားသည့် အကြောင်းအရာများကို နှစ်သက်သည့် ပို့စ်များဖန်တီးပါ။ ဖြေဆိုသူများသည် ပျမ်းမျှအားဖြင့် လူငယ်များကို အာရုံစိုက်လေ့ကျင့်ပေးသည့် တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်များတွင် စိတ်ပါဝင်စားမှု အမြင့်မားဆုံးဖြစ်ကြောင်း သရုပ်ပြကြပြီး ဆိုရှယ်မီဒီယာသည် ယင်းအတွက် အကောင်းဆုံးသော ကြားခံတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာမှုပရိုဂရမ်တွင် စာရင်းသွင်းခြင်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် စိတ်ဝင်စားမှုအဆင့်ကို ညွှန်ပြသော်လည်း လူငယ်အများစုအာရုံစိုက်သည့်ကွန်ရက်အသစ်ကို ဖြေဆိုသူအများအပြားက စိတ်ဝင်စားကြောင်း သရုပ်ပြခဲ့ကြသည်။
ထောက်ခံချက်: ပါဝင်ပတ်သက်ပြီး အချင်းချင်းဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန် စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် လူငယ်အာရုံစိုက်သည့်ကွန်ရက်အသစ်ကို ဖော်ဆောင်ပါ။
ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေး စည်းရုံးရေး
GCPE သည် ကျောင်းသားများသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် ပညာရေးအတွက် ထောက်ခံအားပေးရန် အထူးစိတ်ဝင်စားပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် လူငယ်ပါဝင်မှုသည် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သောကြောင့် ဖြေဆိုသူများအား ၎င်းတို့၏ကျောင်းများနှင့် ရပ်ရွာများတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက် လှုံ့ဆော်ပေးမည့် သင်ကြားရေးစွမ်းရည်များကို စိတ်ပါဝင်စားစွာ သင်ယူခြင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများကို မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ ဖြေဆိုသူများသည် ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေး စည်းရုံးရေးစွမ်းရည်များကို လေ့လာသင်ယူရာတွင် စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်မားသောအဆင့်များကို သရုပ်ပြခဲ့ပြီး အုပ်စုများတစ်လျှောက် ပျမ်းမျှတုံ့ပြန်မှုမှာ 3.6 ဖြစ်ပြီး5မှာ စိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးဖြစ်သည်။ ဤလမ်းကြောင်းများကို အောက်ပါဂရပ်တွင် သရုပ်ပြသည်-
အာဖဂန်နစ္စတန်ရှိ အဆင့်မြင့်ပညာရေးအတွက် ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးရန် အသနားခံစာ
ဂိုဏ်းဂဏကွဲများသည် မြောက်အိုင်ယာလန်၏ ကျောင်းများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်သည်။
PeaceBoat US၊ လက်တင်အမေရိကရှိငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးနှင့်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်များ (နွေရာသီ 2017 ခရီး)၊
ဧပြီလ 13, 2017 ရန်ပုံငွေအခွင့်အလမ်းများ, လူငယ်အာရုံစူးစိုက် 0
Peace Boat သည်လက်တင်အမေရိကရှိ“ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးနှင့်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်များ” ဟုခေါ်သည့်လေ့လာရေးအစီအစဉ်အတွက်“ လူငယ်များအတွက် SDGs အတွက်လှုပ်ရှားမှုအတွက်” ပညာသင်ဆုနှစ်မျိုးကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ဤအထူးအစီအစဉ်သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်ဇွန်လ ၂၀ မှဇူလိုင် ၃ ရက်အထိပနားမား၊ နီကာရာဂွာနှင့်အယ်လ်ဆာဗေးဒေါနိုင်ငံများသို့သွားသောအခါငြိမ်းချမ်းရေးလှေသင်္ဘောပေါ်တွင်ဤအထူးအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
မေလ 19, 2017 သတင်းနှင့်အထူးများ 0
Forest Whitaker ကပြောကြားရာတွင်လက်နက်ကိုင်ပconflictsိပက္ခများမှအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်များနှင့်အလွယ်တကူကျိုးပဲ့သောစစ်မှန်သောလမ်းကြောင်းများနှင့်မှန်မှန်ပြောင်းလဲသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲမှုအကြောင်းကိုပြောဆိုခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
၂၀၁၇ ခုနှစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငယ်များနေ့အတွက်အရေးယူဆောင်ရွက်ပါ။ အမျိုးသားငြိမ်းချမ်းရေးအကယ်ဒမီလူငယ်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုအစီအစဉ်!
သြဂုတ်လ 12, 2017 လှုပ်ရှားမှုသတိပေးချက်များ, လူငယ်အာရုံစူးစိုက် 0
ယနေ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အမျိုးသားငြိမ်းချမ်းရေးအကယ်ဒမီသည်လူငယ်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုအစီအစဉ် - US Youth Rising! [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
Ajay Singh က says:
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 10, 2022 မှာ 10: 37 နံနက်
ရှုပ်ထွေးသောမေးခွန်းများစွာသည် နိုင်ငံရေးကျင့်ဝတ်နှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခများအတွင်း ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းများအတွင်း လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော နျူကလီးယားပြန့်ပွားမှုဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့လုံခြုံရေးအတွက် တညီတညွတ်တည်း ကောက်ချက်ချလိုသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးအတွက် တညီတညွတ်တည်း နိဂုံးချုပ်လိုသော ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် ပညာရှင်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များသည် ပြဿနာများ၏ အသွင်အပြင်ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်သာ ရည်စူးထားပါသည်။ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးရှေ့မှာ ရှုပ်ထွေးတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအဖြစ် တနေ့တခြားတိုးလာနေတဲ့ သူ့ရဲ့အပျက်သဘောတွေကို လျစ်လျူရှုလိုက်ပါ။ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့် လျင်မြန်သောနည်းပညာပြောင်းလဲမှုများ၏ သက်ရောက်မှုများအတွင်းတွင် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့် မညီမျှမှုများသည် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ တိုးပွားလာစေပြီး လူမှုစည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတို့ကို ကြီးမားစွာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေကြောင်း ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့မြင်နိုင်ပေသည်။
ဤအခြေအနေများအတွင်း၊ SDG 4.7 ၏ ပင်မတန်ဖိုးများအပေါ် အခြေခံထားသော ပညာရေးသည် 2030 အစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်နေသည့် ခေတ်ပြိုင်နိုင်ငံရေးနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိရိယာများကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန် အကောင်းဆုံးကိရိယာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် SDG 4.7 သည် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အကြမ်းမဖက်မှု မြှင့်တင်ရေးနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုတို့ကို တန်ဖိုးထားလေးမြတ်မှုတို့အတွက် SDG 16.a ကို ကမ္ဘာအသိုက်အဝန်းအား သဘောတရားတစ်ခုတွင် ချမှတ်နိုင်ရန် လမ်းညွှန်ရန် အခြေခံသဘောတရားကို နက်ရှိုင်းစွာ ခံယူထားသည်။ အမှန်တကယ်အားဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စည်းလုံးညီညွတ်မှုမရှိဘဲ၊ SDGs အောင်မြင်မှုအတွက် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များသည် အချိန်နှင့်အမျှ အာရုံစူးစိုက်မှုပြုရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။
လက်ရှိတွင် အသက် 10 နှစ်မှ 29 နှစ်ကြားရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏လူငယ်မျိုးဆက်များ၏ ကိုယ်ကိုကိုယ်သိစိတ်သည် အထူးသဖြင့် အားနည်းနေပြီး အကြမ်းဖက်မှုပုံစံအားလုံးတွင် အသုံးပြုလျက်ရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်မျိုးဆက်များ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်နှင့် နူကလီးယားပြန့်ပွားမှုကို အမှန်တကယ်ကာကွယ်ရန်အတွက် “တညီတညွတ်တည်း နိဂုံးချုပ်ရန်” လိုအပ်သည့် အကြီးမားဆုံးသော ကမ္ဘာ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်။ အဟီး။
ဒါ့ထက်၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဘာသာရေးသွန်သင်ချက်ကြားက ကွာဟချက် ကွာဟမှုက သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး ရပ်တည်ချက်နဲ့ ရပ်တည်ချက်အရ စစ်ပွဲနဲ့ အကြမ်းဖက်ဝါဒရဲ့ အခြေခံကို ပိုမိုဆိုးရွားစေမယ့် လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့ တယူသန်ဝါဒ စီးပွားရေးအတွက် လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ မြေပြင်ကို ပေးဆောင်နေပါတယ်။ ထို့ကြောင့် စစ်ပွဲနှင့် အကြမ်းဖက်ဝါဒ၏ အခြေခံသည် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုမတူကွဲပြားမှု၏ နိမိတ်လက္ခဏာဖြင့် ရုန်းကန်နေရသော ထိပ်တန်းဘာသာရေးသွန်သင်ချက်အားလုံးအတွက် တွန်းလှန်မရနိုင်သေးပါ။ နောက်ပိုင်းတွင် ဤအခြေအနေမျိုးတွင် ကမ္ဘာ့ငွေကြေးနှင့် သေနတ်စွမ်းအားသည် လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု၊ အစွန်းရောက်မှုများနှင့် အကြမ်းဖက်ဝါဒတို့၏ အတွေးအမြင်များကို တိုက်ဖျက်ရန် လုံလောက်သော အလားအလာမရှိပေ။
ဤအရာများသည် မည်သည်ကိုမျှ လျစ်လျူရှု၍မရနိုင်သော စစ်မှန်သော အမှန်တရားများဖြစ်သည်။ ယင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကမ္ဘာ့အသိုင်းအဝိုင်းသည် ၎င်းတို့၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်များ ဖွံ့ဖြိုးလာစဉ်တွင် ယုံကြည်ခြင်း ဝင်္ကပါများ (ဘာသာရေး သွန်သင်ချက်များ) တွင် စွဲလန်းနေသော ကျွန်ုပ်တို့၏ လူငယ်မျိုးဆက်များ၏ သြတ္တပ္ပစိတ်ကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန် ဉာဏစွမ်းအား (စာပေ) တီထွင်ဆန်းသစ်မှု လိုအပ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ဆိုလိုသည်မှာ “UN-SDG 4.7” ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်ပြီး၊ လက်တွေ့တွင် “UN-SDG16.a” ကို အောင်မြင်ရန် ကမ္ဘာ့အသိုက်အဝန်းအား ကူညီပေးနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ယခုလက်ရှိတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ စာရေးဆရာကြီးများ၏ ဝတ္ထုနှင့် စာပေများသည် ကျွန်ုပ်တို့တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်နေသော ယဉ်ကျေးမှု ကွဲပြားမှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် မျိုးဆက်သစ်များ၏ ကြံဆမှု၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို လမ်းညွှန်ပြသပေးသော ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ကြီးကျယ်သော စာရေးဆရာကြီးများ၏ စာပေများဖြစ်သည်။ "တရားမျှတသောကမ္ဘာ"။ သံသယမရှိပါ၊ အတိတ်နှင့် ပစ္စုပ္ပန်အခြေ အနေများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ကြီးမားသော အယူဝါဒများကို ကိုယ်စားပြုသော်လည်း လက်တွေ့တွင် ယဉ်ကျေးမှု ကွဲပြားမှုကို မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်သော သင့်လျော်သော အဖြေတစ်ခုမရှိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ လိုအပ်နေပါသည်။ ၎င်းသည် ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုအတွင်း ကိုယ်ကျင့်တရားတိုးတက်မှုအတွက် ဖျော်ဖြေရေးတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပြီး ကျောင်းသားများအား ၎င်းတို့၏ ပြောဆိုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ကူညီပေးသည်။ ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ အဆိုပြုသည်မှာ ဖျော်ဖြေရေး နှင့် ဉာဏ်အလင်း နှစ်မျိုးစလုံးအတွက် စာပေ၏ ကျေးဇူးကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် ယနေ့ခေတ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်၊ နိုင်ငံရေးနှင့် သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သော အောင်မြင်မှုများသည် သဘာဝဖြစ်စဉ်ထက် ကျော်လွန်၍ ပြန်လည်ရှင်သန်ထမြောက်လာပြီး လူသားမျိုးနွယ်နှင့် နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျေးဇူးတော်များဆီသို့ ကျဆင်းလျက်ရှိပါသည်။ အန္တရာယ်ရှိသော တွင်းနက်ကြီးတစ်ခု၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု၊ အစွန်းရောက်မှု၊ သည်းမခံနိုင်မှု နှင့် အခြားသော လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းများအတွက် အခြေခံကို ဖန်တီးပေးကာ ယဉ်ကျေးမှု၊ စံနှုန်းများနှင့် အခြားအရာများကြားတွင် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန် လမ်းကြောင်းပေါ်၌ အတားအဆီးများအဖြစ် ဖန်တီးကာ၊ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော အောင်မြင်မှုအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် ယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားမှုကို မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပန်းတိုင်များ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပရောဂျက်သည် ဖျော်ဖြေရေးနှင့် ပေါ်ထွန်းခြင်းနည်းလမ်းများဖြင့် ဉာဏ်အလင်းရရှိရန် အခြေခံအချက်ပြနိုင်ရန် ပညာရေးဆိုင်ရာဗဟိုဌာနများအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ၎င်းသည် စာဖတ်သူများကို ထိရောက်သော ရှင်းလင်းချက်နှင့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော စကားလုံးအနည်းငယ်အတွင်း စူးစမ်းမှုဖြင့် ၎င်း၏ စာဖတ်သူများအတွက် အချိန်ကို ပေါင်းစည်းရန် အင်္ဂလိပ်စာပေနှင့် စမ်းသပ်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အုပ်ချုပ်မှုမူသည် ဘာသာရေးနယ်နိမိတ်များသာမက နယ်နိမိတ်များနှင့် ကွဲပြားမှုများသာမက လူသားအားလုံး ပေါင်းစည်းရေးအတွက် သိပ္ပံနှင့် ယုံကြည်ခြင်းကို အတူတကွ ယူဆောင်လာပါသည်။ ထိရောက်သောလူနေမှုဘဝ၏ သိပ္ပံနည်းကျအခြေခံအုတ်မြစ်များကို ထွန်းလင်းတောက်ပစေရန် နိုင်ငံရေးအမြင်များနှင့် အပြုသဘောဆောင်သောစိတ်သဘောထားများနှင့် သီလများသည် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ဘဝနှင့် နောက်ဆုံးတွင် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏သုခချမ်းသာကို မည်ကဲ့သို့တိုးတက်စေကြောင်း သရုပ်ဖော်ရန်အတွက်လည်း နိုင်ငံရေးအမြင်များဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဘာသာရေး ကွဲပြားမှုများနှင့် ပြိုင်ဆိုင်မှုများဖြင့် ကွဲကွာနေသော လူသားတို့၏ တည်ရှိမှုကို ပေါင်းစည်းရန်သာမက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အားလုံးကို တစ်ခုတည်းသော အယူအဆ၊ အယူအဆနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အမွေဆက်ခံသော သိပ္ပံနည်းကျ ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုအား မြှင့်တင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အမွေဆက်ခံသော တွေးခေါ်မှုစနစ်များထက် ကျော်လွန်သော အယူအဆများကို မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ ပြိုင်ဆိုင်မှု၊ ငြင်းခုံမှု သို့မဟုတ် အငြင်းပွားမှုများအတွက်မဟုတ်ဘဲ ငြိမ်းချမ်းရေးအခြေခံအုတ်မြစ်ပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏တည်ရှိမှု ပေါင်းစည်းရေးအတွက် ရိုးသားစွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပန်းတိုင်အမှန်ကို အမှန်တကယ်အောင်မြင်ရန် လိုအပ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အဆိုပြုထားသော အယူဝါဒကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် အာရုံစိုက်ရန် ဝမ်းမြောက်မိမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်